मदन भण्डारीका ह’त्यारा किन खोज्दैनन् विद्या र केपी ?::अर्थपूर्ण : अर्थ र सम्पूर्ण समाचार
आज जेठ दुई गते। विहान उठेर क्यालेण्डर हेर्दा जेठ दुई देख्ना साथ संझे मैले उनै नेपाली भुमीका महान जननेता मदन भण्डारीलाई। त्यतिवेला म जहाँ थिएँ, त्यहीबाट तत्काल उठेर एक मिनेट मौन धारण गरेँ उनको आत्माको चिर शान्तिको लागि। भोली जेठ तिन गते उनको हत्या भएको दिन।
अनि आफ्सेआफ मनमा जवरजस्त र स्वभाविक एउटा जिज्ञासा उठ्यो। “विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुदाँ पनि किन खोजिदैन जननेता मदन भण्डारीको हत्यारा ?” अहिलेकी राष्ट्रपति अर्थात् मुलुकको सर्वोच्च व्यक्ति उनै मदनकी जीवनसंगीनी र राजनीतिक सहयात्री विद्यादेवी भण्डारी छिन् भने मुलुकको सवै भन्दा शक्तिशाली व्यक्ति उनै मदनका राजनीतिक सहकर्मी केपी शर्मा ओली छन्।
मदनको हत्याले सवै भन्दा बढी असर कसैलाई परेको थियो भने यीनै राष्ट्रपति विद्यादेवीलाई परेको थियो। मदनका हत्यारा पत्ता लगाएर कारवाही गराउन उनको मनले नखोजेको त पक्कै होईन। तर पनि व्यवहारमा हत्याराको खोजी किन हुन सकेन ? फेरी उही प्रश्न आयो मनमा। मनमा एकोहोरो पटक पटक आईरहेको प्रश्नको उत्तर खोज्न एमालेकै केही नेता र विश्लेषक तथा पत्रकारहरुसंग जिज्ञासा राखेँ। तर उत्तर पाउन सकिन। उनीहरु पनि नाजवाफ पाएँ। उनीहरुमा पनि प्रश्नप्रतिको स्वभाविकता देखिएपनि उत्तर नभेटिएको अस्वभाविकता पनि झल्कीयो।
उनी देशको मुहार फेर्ने खाका र राष्ट्रियताका सवालमा वैचारिक रुपमा सुस्पष्ट थिए। एमालेको महासचिव रहेकै बेला तिनै अद्भुत नेताको रहस्यमय हत्या भएको आज २७ बर्ष भईसक्यो। वि.सं. २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङगामा जिप दुर्घटनामा परी उनको निधन भएको थियो। तर त्यो दुर्घटनालाई भने रहस्यमय र मदन भण्डारीको हत्या योजना अनुरुप भएको मानिएको छ। दुर्घटनामा मदनसंगै रहेका एमालेका संगठन विभाग प्रमुख जिवराज आश्रितको पनि निधन भएको थियो। तर जिपका चालक अमर लामा भने दुर्घटनामा परेर पनि जिवितै फर्किन सफल भए।
भण्डारीको हत्या भएको अर्को बर्ष २०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको एकमना सरकार गठन भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका स्व. मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री निवर्वाचित भए। त्यही बेला पनि दासढुंगा हत्याकाण्डको छानवीनको चर्को माग फेरी उठ्यो। नौ महिना सरकार चलाएको एमालेले मदन आश्रितको रहस्यमय घटनाको बारेमा खासै कुनै प्रयत्न गरेन। नौ महिनामात्रै सरकारमा बिताउनु परेको र अल्पमतको सरकार भएकोले सो सम्बन्धी केही प्रगति हुन नसकेको भन्दै एमालेले स्पष्टिकरण दियो। पार्टीले गठन गरेको आयोगका संयोजक ओलीले एमालेको बहुमतको सरकार भए हत्यारा पत्ता लाग्ने दावी गरे।
प्रस्तुत सामाग्री हाम्रा कुरा डटकमबाट साभार गरिएको हो । -सम्पादक